बराहक्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा १ सय ३२ जना, ३ जनामा कोरोना पोजेटिभ
विराटनगरमा पनि भोलीबाट लकडाउन खुकुलो, दिउँसो १२ बजेसम्म सम्पूर्ण पसल खुल्ने
धरानकी एक महिला सहित १८ जना कोरोना जितेर घर फर्किए
के अब नेपालमा पनि लकडाउनको शैली परिवर्तन हुन जरुरी छ ?
दुई दशकमा पनि रहस्यमै दरबार हत्याकाण्ड
नेपालले अफगानिस्तानलाई दियो १९५ रनको लक्ष्य
न्यूजलय शनिबार २६, फागुन २०७४
इटहरी । विश्वकप छनोट क्रिकेटको आफ्नो तेस्रो खेलमा अफगानिस्तानसँग खेलिरहेको नेपालले १ सय ९५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । ४९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै नेपालले १ सय ९४ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
ओपनिङ ब्याट्सम्यानको समस्या झेल्दै आएको नेपालका लागि आज पनि त्यो समस्या....
​ विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल आज अफगानिस्तानसँग भिड्ने
काठमाडौं । आइसीसी विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपाल चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी अफगानिस्तानसँग भिडेने भएको छ । जिम्बाब्वेमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले शनिबार बुलावायोस्थित एथ्लेटिक क्लबमा दिउँसो १ः१५ बजे अफगानिस्तानको सामना गनेभएको छ ।
एक दिवसीय खेलमा नेपाल र अफगानिस्तान अहिलेसम्म सातपटक भिडिसकेका छन् । अफगानिस्तान ६....
​​इटहरीमा प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने
न्यूजलय शुक्रबार २५, फागुन २०७४
​इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा मेयर कप राष्ट्रिय पुरुष अन्तर प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । क्षेत्रिय भलिबल संघ प्रदेश नं. १ इटहरीले शुक्रबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी फागुन ३० गतेदेखि चैत्र ३ गते सम्म सो प्रतियोगिता हुन लागेको जानकारी दिएको हो ।
​फेरी हार्यो नेपाल, स्कटल्यान्डसँग ४ विकेटले पराजित
न्यूजलय बिहीबार २४, फागुन २०७४
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोटको दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको छ । नेपाल चार विकेटले पराजित भएपछि सुपर सिक्समा पुग्ने नेपालको सपना कठिन बनेको छ ।
पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले १४९ रनको झिनो लक्ष्य दिएको थियो । १५० रनको लक्ष्य पछ्याएको स्कटल्यान्डले केएल....
​विश्वकप छनोटमा नेपालको दोश्रो हार, स्कटल्याण्डसँग ४ विकेटले परातिज
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोट अन्तरगतको दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग ४ विकेटले पराजित भएको छ । नेपालले दिएको १५० रनको विजयी लक्ष्य स्कटल्याण्डले ४१ ओभर ३ बलमा ६ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो । स्कटल्याण्डका लागि काइल कोएट्जरले सर्वाधिक ८८ रन बनाए । त्यस्तै म्याथ्यु....
विश्वकप छनौटमा नेपालद्वारा स्कटल्याण्डसामु १५० रनको लक्ष्य प्रस्तुत
इटहरी । विश्वकप छनोट अन्तरगतको दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपाललले स्कटल्याण्डसामु १ सय ५० रनको झिनो विजयी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । सुरुवातदेखि नै खराब प्रदर्शन गरेको नेपालले ४७ ओभर ४ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ४९ रन बनाएको हो ।
​सुर्योदय मेयरकप फूटबलको सेमि फाइनलमा बिर्तामोड नगरपालिका प्रबेश
न्यूजलय बुधबार २३, फागुन २०७४
फिक्कल । इलााममा जारी प्रथम सुर्योदय मेयरकप फूटबल प्रतियोगिताको सेमि फाइनलमा बिर्तामोड नगरपालिका प्रबेश गरेको छ । मंगलबार भएको खेलमा बिर्तामोड नगरपालिकाले फिदिम नगरपालिका बिरुद्ध १–० गोलको संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो । खेलमा बिर्तामोडको तर्फबाट बिकेश लिम्बूले २१ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्य....
भरौलमा तेस्रो अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कप हुने
न्यूजलय सोमबार २१, फागुन २०७४
बराहक्षेत्र । भरौलमा तेस्रो अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित भरौल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता २०७४ आयोजना हुने भएको छ । आयोजकले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि गोल्डकपको तयारी बारे जानकारी गराएको हो ।
स्थानिय न्यु स्टार क्लव,बराहको आयोजनामा फागुन २६ गते देखि चैत्र ३ गते सम्म सञ्चालित खेलमा....
​जिम्बाबेसँग हार्यो नेपाल, कारण यस्तो छ
न्यूजलय आइतबार २०, फागुन २०७४
काठमाडौं । सधैं बलिङमा अघि नेपाली क्रिकेटरहरु यो पटक भने निरिह देखिए । जिम्बाबेका ब्याट्सम्यान सामू बलरहरु निरीह भएपछि विश्वकप छनोटको पहिलो खेलमा नेपाल ११६ रनको विशाल अन्तरले पराजित भएको छ ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाबेले ३८१ रनको विशाल लक्ष्य दिएको थियो....
नेइमारको गोलीगाँठोको शल्यक्रिया सम्पन्न
काठमाण्डौ । विश्वकै महंगा फुटबलर नेइमारको गोलीगाँठोको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । लिग वान अन्तर्गत मार्सेलीविरुद्ध ३–० को जीत निकाल्ने क्रममा उनी घाइते भएका थिए।
नेइमारको शनिबार बिहान ब्राजिलको बेलो होरिजोन्टेस्थित माटेर्डेयी अस्पतालमा शल्यक्रिया भएको हो । क्लबले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कम्तिमा ६....
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार नाघ्न सक्ने सरकारी आंकलन
सुन्दरहरैंचाका एक युवकमा कोरोना पुष्टि
कोरोना बीमा स्थगित !
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट १० औँ व्यक्तिको मृत्यु